बिमस्टेक सम्मेलनः उपत्यकामा दुई दिन शिक्षण संस्था बिदा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — बिमस्टेक चौथो शिखर सम्मेलनका कारण काठमाडौं उपत्यकाका शिक्षण संस्थाहरु दुई दिन बन्द गरिने भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यही भदौ १४ र १५ गते शैक्षिक संस्थाहरु बिदा मिलाउन पत्राचार गरेको छ। उसले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका स्थानीय तह (नगरपालिका र महानगरपालिका)मार्फत् बिदा मिलाउन भनेको छ।
‘काठमाडौंमा हुन गइरहेको बिमस्टेक चौथो शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन आउने विदेशी अतिथी तथा प्रतिनिधिहरुको आवागमनलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र सहज बनाउने उद्देश्यले भदौ १४ र १५ गते दुई दिन शिक्षण संस्था बिदा गर्न, शिक्षण संस्थाका सवारी साधनसमेत उक्त दिन नचलाउने व्यवस्थाका लागि,’ शिक्षा मन्त्रालयको पत्रसमेत उल्लेख गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ, ‘स्थानीय सरकार (नगपालिका र महानगरपालिका) मार्फत् बिदा गर्न र उक्त दुईदिन शिक्षण संस्थाका सवारी नचलाउने मन्त्री स्तरीय निर्णय भई आएकोले सो अनुसार गर्नु गराउनु हुन आदेशअनुसार अनुरोध छ।’
प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ १६:१५
भाद्र १२, २०७५ नवीन रायमाझी
काठमाडौँ — पंक्तिकार अमेरिकाको सामाजिक, राजनैतिक र आर्थिक अबस्थाको बारेमा बहस गर्न सक्ने बौद्धिक हैसियत राख्दैन । तर, यसै समाजमा बसोबास गर्ने भएको कारण धेरै कुराहरु देखिन्छ, सुनिन्छ र भोगिन्छ, जसलाई नकार्न सकिन्न ।
यता बसोबास गर्ने र आफुलाई सबै बिषयमा जानकार सम्झिने केहि मान्यबरहरुले मलाई नकारात्मक सोचले ग्रस्त र आफ्नै नेपाली दाजु भाइको मात्र खोइरो खन्ने आरोप लगाएका छन्। एक महामानवले त मलाई आफ्नो पहुँच प्रयोग गरेर यो पोर्टलमा कुनै पनि बिचार प्रकाशित गर्न रोक लगाइ दिने कुरा पनि गरेका थिए। मैले आजसम्म कुनै पनि ब्यक्तिलाई तोकेर उसको हाँसी माजक गरेको छैन। तर, सत्य जे हो उजागर पनि त्यही गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ, सदा रहने छ।
अब यस कुरामा कसैलाई आपत्ति छ भने त्यो उसको समस्या हो र त्यस्ता समस्या आफैले समाधान गर्नुपर्छ, अरुलाई तथानाम गाली गरेर केही पनि हुनेवाला छैन। यो लेखमा मैले उठाएका प्रसंगहरुलाई कसैले झुटो प्रमाणित गर्छ भने म अब उप्रान्त लेख्ने छैन तर बास्तविक कुरा हो, किन लेख्नु भन्छ भने त्यो उसको कमजोर मानसिकताको उपज हो। मेरो मतलब हामीले ठाउँ र जमाना अनुसार आफुलाई "अपडेट" र "अपग्रेड" गर्नु पर्छ, सिक्ने र बुझ्ने क्रम कहिले पनि अन्त हुँदैन भन्ने हो।
पंक्तिकारको एउटा परिचित ट्याक्सी चलाउने काम गर्छन्। बिहानको छ बजेदेखि रातको आठ बजेसम्म गाडी हाँक्दा तिघ्राको पछाडि र फिलाको छाला हलो जोत्दा जोत्दा गरेको गोरुको गर्धन जस्तो भएको छ अर्थात छाला मरिसकेको छ। तर, उ आफुलाई सम्पन्न र खुशी देखाउन सामाजिक सञ्जालमा किसिम किसिमको फोटो अपलोड गरिरहन्छन्। मेरो बिचारमा अरुलाई आफु खुशी भएको देखाएर नाटक गर्नु भन्दा आफै भित्रबाट खुशी हुनु महत्वपूर्ण हो। यो मान्छे जीवनदेखि खुशी छ भनेर कसैले प्रमाणपत्र दिनु पर्दैन।
त्यस्तै एउटा दम्पति छन्, उनीहरुलाई "मेसिज्" नामको महँगो पसलबाट मात्र लुगा किनेर लगाउनु पर्छ। पैसा हालेर किन्ने भए कुनै कुरा गर्नु पर्दैन थियो, उनीहरुले अमेरिकी सरकारले उपभोक्तालाई दिएको अधिकारको यसरी दुरुपयोग गरेका छन् कि सुन्दा पनि लाज लाग्छ। हरेक उत्सव तथा समारोहमा नयाँ लुगा किनेर लगाउने तर त्यसको लेबल तथा बिल जतन साथ राख्ने, जब आफ्नो काम सकिन्छ त्यसपछि आफुलाई मन नपरेको भन्दै फर्काइदिने। त्यस्तै नेपालबाट पाहुना आएको बेलामा किनेर ल्याएको ओछ्यान उनीहरु नेपाल फर्के पछि फिर्ता गरेको पनि पंक्तिकारले थाहा पाएको छ।
त्यस्तै अर्का पात्र छन्, कुनै प्रसंग बिना नै आफ्नो काठमाडौँमा पाँच तल्ले घर भएको र प्रतिमहिना तीन लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने बताइरहन्छन्। प्रथम त जसको जति तल्ले घर भए पनि र जति आम्दानी भए पनि अर्कोलाई कुनै सरोकार हुने कुरा भएन। अर्कोले त्यो घर र पैसाको उपयोग गर्न पाउने होइन। जब उपयोग गर्न नपाउने कुरामा नै खुशी हुनु छ भने यो संसारमा धेरै सम्पन्न मान्छेहरु छन् उनीहरुको महल जस्तो घर हेरेर खुशी भए भयो। त्यसको तुलनामा मजदुरी गरेर कमाएको पैसाको कुनै औकात नै हुँदैन, त्यसैले मेरो बिचारमा यस्तो कुरा सबैलाई भन्नु उचित होइन। दोश्रो, नेपालमा जत्रो घर भए पनि यता छिंडी (बेसमेन्ट) मा सुत्नु परेको छ, यसरी उपभोग गर्न नपाए पछि त्यो घर हुनु र नहुनुमा के अर्थ रहन्छ?
त्यस्तै मेरो कमाइ यति र उति भनेर हैरान पार्ने अर्को वर्ग पनि छ। सबैले आफ्नो क्षमता र योग्यता अनुसार कमाइ गर्ने हो त्यसमा पनि प्रचार प्रसार गर्दै हिड्नुको कुनै मतलब छैन। हालै प्रकाशित अमेरिकामा धेरै तलब खाने एक सय एक सीइओहरुमा वार्षिक २० लाख डलर तलब खाने ब्यक्तिहरु पनि छन्। माइक्रोसफ्ट कम्पनीका सीइओ सत्य नरुला सबैभन्दा बढी तलब खानेमा पर्छन्। अब सोच्नुस् यत्रो रकम त के यसको चौथाई रकम तलब खाने पनि कुनै नेपाली छैनन् अमेरिकामा। अब अमेरिकी सरकारको दृष्टिमा "लो इन्कम" गर्नेहरुले कमाई को के फुर्ति गर्नु?
अमेरिकालाई मान्छेहरु अवसरै अवसरको देश भन्छन्। त्यस्तो अवसर कसले कति पायो वा केवल भन्नको लागि मात्र भनिरहेका छन् त्यो पंक्तिकारलाई जानकारी भएन। तर, अमेरिकाले सबैलाई कडा परिश्रम गर्न भने सिकाउँछ। कडा परिश्रम गरेपछि परिणाम पनि राम्रै हुनेमा कुनै शंका छैन। समयको सदुपयोग गरेर काम गर्ने हो भने यो देशमा सबैलाई काम छ, यहाँ बेरोजगार भनेको अल्छी मान्छे मात्र हो।
प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ १६:१२